Fifidianana filoham-pirenena : Amin’ny faha-7 novambra -
AccueilRaharaham-pirenenaFifidianana filoham-pirenena : Amin’ny faha-7 novambra
Raha samy nametra-panontaniana ny besinimaro mahakasika ny datim-pifidianana taorian’ny fanomezan’ny vaomiera mahaleo tena misahana ny fifidianana na ny CENI ny volavolana tetiandron’ny lehiben’ny governemanta, dia omaly maraina no namoahan’ny praiminisitra Ntsay Christian ireo daty ofisialy. Noho izany, taorian’ny filankevitry ny governemanta izay nambaran’ny praiminisitra fa nisiana adihevitra lalina sy fifanakalozana dia hotanterahina ny faha-7 ny volana novambra ny dingana voalohany amin’ny fifidianana filoham-pirenena, ary ny faha-19 ny volana desambra kosa ny fihodinana faharoa. Raha ny fanazavana nentin’ ny praiminisitra Ntsay Christian mahakasika ny filazana ny daty ofisialy omaly, dia nambarany fa tsy maintsy nandrasana aloha ny fankatoavan’ireo antenimiera ny drafi-panatanterahany ny politika ankapoben’ny fitondrana, satria dia tsy afaka dinganina hoy izy io dingana io raha hiroso amin’ny fifidianana.
Noho izany raha hilatsaka hofidiana ny filoham-pirenena ankehitriny, atoa Hery Rajaonarimampianina dia mazava ny ambaran’ny lalàm-panorenana ao amin’ ny andininy faha-46, fa raha toa hilatsaka ny filoha amperin’asa dia tsy maintsy mametra-pialana 60 andro alohan’ny datim-pifidianana. Izany hoe raha toa ka ny faha-7 ny volana novambra ny fifidianana ka hirotsaka ny filoham-pirenena ankehitriny dia tokony hametra-pialana ny faha-7 ny volana septambra. Mikasika ny fanombohan’ny fampilezan-kevitra indray izay telopolo andro alohan’ny datim-pifidianana voafaritra dia hanomboka ny faha-8 n’ny volana oktobra izany, ary hifarana andro iray mialohan’ny hanatanterahana ny fifidianana, izay hoe any amin’ny fiandohan’ny volana septambra any ho any izany no handeha ny fametrahana antontan-taratasim-pilatsahana hofidiana. Ny tsara ho fantatra farany dia ny mikasika ny fiantsoana ny mpifidy izay voafaritry ny lalàm-pifidianana fa 90 andro alohan’ny datim-pifidianana , ka raha atao ny fanisana dia ny faha-7 ny volana aogositra indray izany no hivoaka ny fiantsoana ny mpifidy .